कलियुगका कुरा: फेसबुकेको नारा चित्त बुझेन
फेसबुकेको नारा चित्त बुझेन
हामी फुसबुकेहरुको ज्याला पुरा लियौ अब संविधान देउ भन्ने नारा फिटिक्कै चित बुझ्या छैन यार मलाई। ज्याल पुरा त पोहोर जेठ मै लिएका हुन् नि तिनले। 'एडभान्स नि धेरै लग्यौ,संविधान पनि दिएनौ, हामीलाई ठग्नु ठग्यौ, हामी हेरेका हेरै भएम्, हामी दुई चार दिन कराम्छम्, त्यसपछि आफ्ना आफ्ना काममा लाग्छम्, तिमीहरुलाई जे जे मन लाग्छ त्यही गर'हुनुपर्छ। अहिले यो कुरा भन्दा रिसाउँछन् फेसबुककर्मीहरु तर भोलिपर्सी त्यस्तै हुन्छ...
यिनहरुको पहिलो माइतिघरको धर्नामा त म जान पाइन। तर त्यसपछिका दुईटा जुलुस हो कि धर्ना हो कि के हो एउटा संविधान सभाको भवन र अर्को खुलामञ्चकोमा जान गएँ। त्यहाँका आन्दोलन हेर्दा पनि मलाई त्यस्तै लक्षण हो कि भन्ने लाग्यो।
यो कुरा मैले पहिला पनि दुई दुई पटक भनिसकेको हुँ फेरि।
पोहोर म्याद थप्ने बित्तिकै नारा जुलुश धर्ना गरेको भए अहिलेसम्म पक्का संविधान बन्दथ्यो। पोहोर म्याद थप्ने बेला तिर दुई चार दिन खुब बेला संविधान देउ भनेर उफ्रिए पछि छाड्दिए। अहिले पनि त्यस्तै भाछ ।
FEBRUARY 17, 2011 मा पनि पुन: स्मरण गराएको थिए
झटारो काँइला May 26, 2011 at 12:38 AM
पत्रकारको कामै समस्या मात्र उजागर गर्नी यार? त्यसोभए उपाय चाहि केछत, निकाल्न परो नि, तेस्सै गर्चम ल ! यति नि धन्न गर्या छन भनेर भन्नु त कता हो कता ।